Budata Laser Slice APK maka Android
Budata Laser Slice
Budata Laser Slice,
Laser Slice bụ egwuregwu nka nke nwere ike ịgba ọsọ na sistemụ arụmọrụ gam akporo.
Slice Laser, nke onye nrụpụta egwuregwu Turkey Barış İntepe mere, bụ otu nime egwuregwu Turkey kacha aga nke ọma na nke na-atọ ụtọ noge na-adịbeghị anya. Ebumnuche anyị bụ isi na egwuregwu ahụ bụ ikpochapụ ụdị dị iche iche na-apụta na ihe omume ọ bụla site nenyemaka nke egbe laser. Mpekere Laser, nke bụ ụdị ngwakọta nke ọgbara ọhụrụ na retro nwere usoro ya dị ka egwuregwu nke 1980s, bụ egwuregwu na-adọrọ adọrọ nke nwere eserese na egwu ya.
Akụkụ ọzọ nke mmepụta, nke na-ewu ewu nke ukwuu na egwu ya na mmetụta ụda ya, bụ na ọ bụ kpamkpam nefu. Enweghị ihe enwere ike ịzụta na egwuregwu ahụ, ọ nweghịkwa mgbasa ozi. Ya mere, ị nwere ike igwu egwu egwuregwu ahụ dị ọcha na nke ọma na ọkwa ịchọrọ. Na-arịọ ọtụtụ ndị egwuregwu arịrịọ site na causal ruo hardcore na usoro ihe na-eri ahụ na egwuregwu egwuregwu, Laser Slice bụ otu nime egwuregwu anyị na-akwado.
Android version2.3 na nelu
Laser Slice Ụdịdị
Mmepụta: baris intepe